သူတို့ ယာတဲအိမ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » သူတို့ ယာတဲအိမ်
Posted by ကျော်စွာခေါင် on Jun 7, 2013 in Arts & Humanities | 24 comments
ဥရောပမြေက ယာတဲပါဘဲ..။ ဂျုံစိုက်မယ်..သီးနှံစိုက်မယ်.. နွားတွေ သိုးတွေ မွေးမြူရေးလုပ်မယ်..။
ဆွဲလို့ လဲ ကောင်းပါတယ်.. ဆီဆေးကို ကင်းဗတ်စပေါ်မှာ KNIFE နဲ့ ရေးဆွဲထားတာပါ..။
ကျနော်တို့ ဆီက ယာတဲလိုတော့…ခွေးဟောင်သံ၊ ယုန်လိုက်သံ၊ တောထိုးသံ..။
ထန်းတောထဲက ဖောက်ထွက်နေတဲ့ မြူခိုးတွေ.. ထန်းရွက်ခြင်း ပွတ်တိုက်တာတွေ..လေအဝှေ့ အရမ်းမှာ ထန်းလှေကားက တကျွီကျွီ မြည်သံတွေ..
ထန်းမြူအိုးခြင်း ပွတ်တိုက်သံ.. နွားခလောက်သံ..နွားကျောင်းသားရဲ့ ပုလွေ သံ…. နေ၀င်စ ချိုးဌက်ကူသံ……ဘာမှ..
ခဲရော.. ရေဆေးရော.. ဆီဆေးရော.. လေးစားပါရဲ့ဗျာ…။
ရန်ကုန်မှာ ခဏ ဆက်သွယ်ဘူးပါတယ်.. နာမည်ကြီး ရုပ်ပြဆရာက ဆက်သွယ်တယ်လေ..ခဲလိုင်းကောက်ပေးဘို့ ..
၁ဖောင်ကို…း) ၁၆မျက်နှာကို ဟိုတုန်းက ၈၀ ကျပ်တောင်ပေးမယ်တဲ့.. အဲဒီတုန်းက ကျနော်က တနေ့လုပ်ခ ၇၀၀ ကျပ် ရတဲ့
အလုပ်မှာပါ..။ သူကတော့ မသိရှာပါဘူး…။ နောက်ဗိုလ်ချုပ်ဈေး လောကကို ပုံသွားပြတော့ နှိမ်လိုက်ကြတာဗျာ.. ပန်းချီကို နားမလည်ဘဲ ဈေးကဆစ်နေသေးတယ်..သူပေးတဲ့ ရေဆေး ၁ ကားဘိုးက တာမွေ ဆူးလေ တက္ကဆီတခြမ်း ခတောင် မရှိပါဘူး..။
ကျနော်နဲ့ မကိုက်ပါဘူး..အကိုရာ..။ ကျနော်ကလည်း ခပ် အအ ရယ်နဲ့ ..။
ရန်ကုန်မှာ မဆွဲခဲ့ဘူးလို့ ပြောရမှာပါဘဲ..။
အယ်လ်အေမှာ.. ကိုယ့်ပန်းချီကားတွေ.. ချရောင်းလို့ရတဲ့.. ပင်လယ်ကမ်းခြေလူစီတဲ့နေရာတွေရှိတယ်..။
.. မြန်မာပန်းချီပြခန်းလေးတခုလုပ်ဖို့တောင်..စုံစမ်းဖူးသေးတယ်.. ၊
@ kyaw swar kaung
ရွာထဲမှာ အနုပညာတစ်မျိုး ထပ်တိုးလာတာကို ကြိုဆိုတဲ့အပြင်….
ဒါ့ထက် ကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ် ပြောရရင် သူတို့ယာတောက ပျင်းစရာကောင်းနေသလားလို့
စီ ဆိုတာ ပစ္စည်းစီ၊ စီစဉ်၊ စာစီကုံး၊ စီမံ၊ စီရင်ထုံး စတာ တွေကို သုံးပြီး၊
စည် ကိုမှ စည်ကား၊ စည်ပင်၊ စည်ပိုင်း၊ စည်သွတ် ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာ သုံးပါတယ်။
ဘုန်းကြီးစာချတယ်လို့တော့ မထင်ပါနဲ့ နောာာာာာာာာာာ :harr:
ကျနော် ကြိုးစားကြည့်ပါဦးမယ်.. ကလိကြည့်ပါ့မယ်..နောက်ပုံတင်တဲ့အခါ။
ဆီဆေးကတော့ ထုံးစံအတိုင်း အရောင် စိုစိုနဲ့ ကြည့်ရတာ ပသာဒဖြစ်သဗျ။
ဒါမဲ့ ကျနော့ စိတ် အရဆို ရေဆေးနဲ့ ခဲခြစ်ကို ရင်ခုန်ကြောင်းပါ။
၇ တန်းတုန်းက ကိုယ့် စီနီရာ တစ်ယောက် စာရွက်ကို ရေစိမ်လိုက်ပြီးမှ ဆေးရောင်လိုက် တို့ ပြီး ကိုယ့်မျက်စိရှေ့တင် ပန်းချီကားလေးဖြစ်သွားတာကို မြင်ဘူးရာက စ တာပေါ့။ အဲ့ နည်း က ဘာခေါ်တုန်းတော့မသိ။
ကယ်ရီကေးချားကတော့ အဆွဲ မခံရဲလို့ ဘေးကပဲထိုင်ကြည့်ခဲ့တယ်။
ဒါနဲ့ ကိုကမ်း ရော ဒီ ပို့(စ) ကို မလာဘူးလားမသိ။
ဒီ လူဂျီးနဲ့ လည်း ပန်းချီအကြောင်း အတော်ပြောလို့ ကောင်းမဲ့ပုံပဲ။ စကားစပ်ဖူးတယ်။
ပန်းချီရဲ့ အခြေခံက ခဲခြစ်ပါဘဲ..ခဲခြစ်ကိုလည်း အောက်သက်ကျေဘို့ ပါတယ်..။ နောက်ေ၇ဆေး..သူက တကယ်ခက်တာဗျ..။
ဆီဆေးက ကိုယ်လိုချင်သလိုရတယ်.. ရေဆေးက တကယ်မလွယ်တာပါ..။ ဥပမာ ပြောရရင်.. ဆိဆေးက ကိုယ်ညှိယူလို့ ရတဲ့
ဇနီး တယောက် ဆိုရင်.. ရေဆေးက သူများနဲ့ ပြိုင်ပိုးပြီး ချစ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့..ငယ်ရည်းစားလိုဘဲ..။ အမိန့် ပေးလို့ မရဘူး..
ကြမ်းလို့ မရဘူး..သူ့ အထာကိုသိရမယ်.. တချက်အမှားမခံဘူး…။ ဆီဆေးကား အရောင်မှားလို့ ပစ်ရတာ မရှိဘူး..။
ရေဆေးဘဲ …ရေ+ဆေး+စက္ကူ+ စုတ်ချက်+ အချိန်အဆ အားလုံးက တိုင်ပင်ကိုက်နေရမယ်.. တခုခု အချိုးအဆ တိမ်းသွားတာနဲ့ 
ပစ်လိုက်ရတော့တာဘဲ..ဘယ်လိုမှ ဆက်ထိန်းဆွဲလို့မလွယ်တော့ဘူး..ရည်းစားနဲ့ ကိုယ် အယူအဆ တခုခု လွဲမှားလို့ ကိုယ့်ကို သူက
စွန်ူပစ်သွားသလိုဘဲ…။ အရသာကွာတယ်ဗျ..။ ဆိဆေးမှားတာက မိန်းမနဲ့ စကားများပြီး အိမ်ကနေ သူထွက်သွားမယ်..
နောက် စိတ်လည်ပြီး ပြန်ရောက်လာတာဘဲ..ဆက်ပေါင်းတာဘဲ..အဲလိုမျိုး…။
အကိုပြောတဲ့ စက္ကူကို ရေဆွတ်တာက WASH လုပ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်.. ရေမျှော အစို ဆွဲနည်းပေါ့..။ ရေမဆွတ်ဘဲ
အခြောက်ဆွဲနည်းလဲ ရှိသေးတယ်..( မိတ်ကပ် ခင်စန်းဝင်းကို ဆွဲတာ မဟုတ်ပါ) ။ နောက်ကြုံရင် ရေးဆွဲနည်း ၂ခုယှဉ်ပြီး ပုံတင်ပေးပါ့မယ်။
သို့သော် အခုဒီ. ကောမန့်မြင်ရတော့မှ.
ကိုယ့်ဆြာက ငြင်းဖိုမြလိုအောင် အမှန်တကယ်
တတ်ကျွမ်းပြီး အကျအန နားလည်ထားတဲ့အပြင်
ဆိုင်ရာ ပရိုလောကက စကေးလ်မျိုး မရှိတဲ့
သာမာန်လူ နားလည်အောင် ပြတ်ပြတ်ထင်ထင်
ညည်းမဟုတ်ဘူးပြောမှ နာ လူပြိန်းဖြစ်ပါပြီ။။
ဟီး။ ဟုတ်လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ အနုပညာ မှာရော၊ နည်းပညာမှာရော အတော်ပြိန်းတာပါ။
ရှင်းပြတဲ့ ကိုကျော်စွာခေါင်ကိုလည်း ကျေးဇူးပါ။
နောက်များလည်း မရှင်းတာရှိရင် အားမနာတမ်းမေးပါရစေလို့။
စိတ်ကူးထဲမှာပန်းချီဆွဲမယ်။ Piano တီးမယ်။ ဓါတ်ပုံရိက်မယ်။ ခရီးသွားမယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါတွေ တစ်ခုမှဖြစ်မလာဘူး။
ပန်းချီဆွဲတာ genius ဖြစ်တဲ့ သူတွေလို့ထင်မိပါကြောင်း။
ဥရောပ ရဲ့. မလှပတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ဆွဲရင် ပိုလှပ မယ်ထင်မိပါကြောင်း။
လဲ့ဂလေး ပျာနိုတီးချင်ယင် လာခဲ့ယီ.
လက်နဲ့ရော ကွန်ပျူတာနဲ့ပါ ဘယ်လိုမှ မဆွဲတတ်ဖူးဗျ
ဒါကြောင့် ဆွဲထားတာကိုပဲ ကြည့်ရှုခံစား အားပေးသွားပါတယ်ဗျို့
ကို ကျော်စွာခေါင် ရေ ။
ပန်းချီကားလေးကို သဘောကျပါတယ်ကွယ် ။
ကျုပ်ငယ်ငယ်က ဗိုလ်ချုပ်ပုံကို ကြည့်ဆွဲဖူးတယ်
ပီးသွားတော့ ဗိုလ်ချုပ်ခမြာ ရုပ်ဆိုးသွားရှာလို့ ပုံဆွဲတဲ့အလုပ်စွန့်လိုက်ရပါဂျောင်းးး
အော် အနုပညာနဲ့ ဝေးပုံများ…သူများတွေ ကောင်းတယ် လှတယ်ပြောလို့မှ
ရှုခင်းပုံဖြစ်လို့ သဘောကျကြောင်း….မြက်ခင်းတွေပါလို့ ပို..ပိုသဘောကြကြောင်း
လှလိုက်တာ ပန်းချီဆွဲထားတာနဲ့တောင်မတူဘူး ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့အတိုင်းဘဲ.. တော်လိုက်တဲ့ အူးလေး
မနေ့က လမ်းပေါ်မှာ ကတ်ထူပြားပေါ် စုတ်တံနဲ့ ရှုခင်းပုံတွေ ဆွဲပေးနေတဲ့ ကလေးမလေးတွေ့မိတယ်။
စုတ်တံအပြားကြီးကို ဆေးအစိမ်းတို့ပြီး စက္ကူဖြူပေါ်အပြားလိုက် တို့တို့သွားတာ မျက်စိရှေ့တင် သစ်ပင်ကြီးဝေေ၀ဆာဆာဖြစ်သွားရော။
ကိုယ်က အဲသလောက်တောင် တအံ့တသြဖြစ်နေရတာ…
ဒီလို လက်ရာကတော့ အံ့ချီးမကုန်ပဲ။
ချီးကျူးတာလဲ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ…ဒါပေမယ့် ကျနော်က ရွာကို တခါမှ မလာဘူးဘဲ ပထမဆုံးရောက်လာတဲ့
ချောက်တိချောက်ချက် မျက်လှည့်ဆရာ အဆင့်လောက်ပါ.. တကယ့်ဆရာကြီးတွေ မလာခင်အထိတော့ ရွာသားတွေ အတွက် အထူးအဆန်း ဖြစ်ပြီး..အံ့သြ ချီးမွမ်းကြသလိုပေါ့..။
ကျနော့်ထက်တော်သူတွေ မြန်မာပြည်မှာ အများကြီးပါ… အခြေအနေ အချိန်အခါ ကြောင့် သူတို့ မပေါ်လွင်နိုင်ကြတာပါ..။
ကျနော့် အားပေးသလို သူတို့ ကိုလဲ အားပေးကြပါဗျာ..။ မနေ့ ကတွေ့ တဲ့ ပန်းချီဆွဲနေတဲ့ ကလေးမလေးတွေ တွေ့ ရင်လည်း အားပေးပါ..။ ၉၈ ခုနှစ်လောက်ကထင်ပါတယ်..နီလာဒန်ပေါက်တပွဲ ၂၀၀ ကျပ်လောက်ဘဲ ပေးရတဲ့အချိန်က ၃၂ လမ်းလားမသိဘူး..ကာကာကြီး ပန်းချီဆိုင်မှာ အင်္ဂလန်ေ၇ဆေး စူတ်တချောင်း ၅၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ကျနော် ၀ယ်တာကို ငေးကြည့်နေတဲ့ ပန်းချီ ကျောင်းသားလေးတွေ မျက်လုံးကို ကျနော် အခုထိ မမေ့နိုင်သလို စိတ်လည်းမကောင်း ဖြစ်နေတုန်းပါ..။
နောက်လူငယ်လေးတွေကိုလည်း အားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုပါ၇စေ..။
ပန်းချီအနုပညာ ကို ကောင်းကောင်းနားမလည်ပေမယ့်
ကိုကျော်စွာ့ လက်ရာ ကို အားပေးသွားပါတယ်
ဒီမယ်-ဆြာဂီ။ ရှင်တို့ပြောပြောနေတဲ့ piano ကိုသေသေချာချာမသိပေမဲ့- တကယ့်piano မဟုတ်မှန်းရိပ်စားမိတယ်။ တကယ့် piano လည်း အနားမကပ်နိုင်လို့ လက်တွေ့ဘဝ က ကီးဘုတ်ကိုပဲတီးတော့တယ်။ (computer’s keyboard) တော်ကြာ တမျိုးအဓိပါယ်ကောက်နေဦးမယ်။
ရေဆေးနဲ့ ဆီဆေး ခွဲခြားပြတဲ့ ဥပမာလေးလဲ သဘောကျသဗျာ..